🥇 ▷ Ciyaaraha caadiga ah ee Nintendo Switch Online sida kuwa NES iyo SNES ayaa sii socon doona oo la sii daabici doono, laakiin xilli ahaan looma baahna ✅
Ciyaaraha caadiga ah ee Nintendo Switch Online sida kuwa NES iyo SNES ayaa sii socon doona oo la sii daabici doono, laakiin xilli ahaan looma baahna
Mid ka mid ah qaraxyadii ugu waynaa ee ka tagtay Nintendo Direct toddobaadkan ayaa ah in laga bilaabo maanta dhammaan kuwa la diiwaangeliyay Nintendo Switch On-line Waxaad hadda u heli kartaa kala soo degsiga 20-ka kulan ee ugu horreeya SNES gudaha Nintendo Switch, oo ay ka mid yihiin qaar Classic ah sida Super Mario World, Super Mario Kart, Star Fox ama Super Metroid.
Iyada oo la imanayo cinwaannada sheeko-sheeko 16-bit console ah, Nintendo ayaa daabici doona laga bilaabo hadda ciyaaraha labadan iyo NES labadaba. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo hadda cinwaannada cusub waxay soo galayaan dufcaddiiba hal mar bishii, waa wax isbeddelaya mustaqbalka.
Sida ku xusan bogga weyn ee N boggeeda rasmiga ah ee ku yaal Japan, dhamaan ciyaaraha labada garoon si joogto ah ayaa loogu dari doonaa. Portal Vooks-ka Australia wuxuu la xiriiray Nintendo si loo hubiyo haddii go’aankan yahay Waxay sidoo kale khusaysaa suuqyada kale jawaabta uu helayna waa haa, waxay sidoo kale ka dhici doontaa Waqooyiga Ameerika iyo Yurub.
Sidaa darteed, ciyaaraha mustaqbalka ee imaan doona waxay joogsan doontaa in la daabaco muddo cayiman. Marka, waxaa laga yaabaa inay yimaadaan hal mar bil ama dhowr toddobaad kasta ama marka Nintendo u maleeyo inay ku habboon tahay, markaa weligeen ma ogaan doonno sida saxda ah ee buugyaraha codsigan loo ballaarin doono. Nintendo Switch Online, laakiin qormadan qaybteeda koowaad ee SNES waxaan ku raaxaysan doonaa madadaalo ilaa wakhti fiican.
Wadaag Ciyaaraha caadiga ah ee Nintendo Switch Online sida kuwa NES iyo SNES ayaa sii socon doona la sii daabacayo, laakiin ma ahan xilli xilli la joogo